सडकमा यसरी हिडौं
नजिकै आकाशे पुल छ तर त्यसको प्रयोग धेरैले गर्दैनौ । जेब्रा क्रसिङबाट पनि थोरैले मात्र बाटो काट्छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङक अनुसार विश्वमा वर्षेनी सडक दुर्घटना कै कारण झण्डै १३ लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । नेपालमा मात्र १७ सयदेखि २ हजारसम्मले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
हजारौको संख्यामा अपाङ्ग हुन्छन् । त्यसमा पनि १६ देखि ३५ वर्षसम्मका यूवा सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । ट्राफिक नियमको पालना गर्दा संभावित दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ । त्यसको लागि पैदलयात्री, बालबालिका र चालकले आफ्नो ठाउँबाट नियम पालना गर्दा दुर्घटना कम गर्न मद्दत गर्छ ।
बालबालिकाले के गर्नुपर्छ त ?
पैदल यात्रा पर्दा फुटपाथको मात्र प्रयोग गर्ने, फुटपाथ नभएको अवस्थामा दाहिने किनाराबाट हिँड्ने, दाहिने किनाराको प्रयोग गर्दा अगाडिबाट आएको गाडी देख्न सकिन्छ बायाँबाट पछाडिबाट आएको गाडी नदेख्दा दुर्घटना हुन सक्छ ।
जेब्रा क्रसिङबाटबाट पार गर्ने । जेब्रा क्रसिङ नभएको ठाउँमा दायाबाँया र फेरि दायाँ हेरेर मात्र बाटो काट्ने
आकाशे पुल र सव वे भएको ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्ने
सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई कुनै दुव्र्यवहार भएको खण्डमा नेपाल प्रहरीको १०० नम्बर, ट्राफिक प्रहरीको नम्बर १०३ मा फोन गरेर जानकारी दिने
अँध्यारोमा पैदल यात्रा गर्दा चम्किलो लुगा लगाउने, कालोे निलो नलगाएर, सेतो, पहेँलो वा टल्किने लुगा लगाउने
बालबालिकाले गाडीमा यात्रा गर्दा अगाडिको सिटमा नबस्ने
ट्राफिक बत्ति भएको ठाउँमा हरियो बत्ति बलेपछि मात्र बाटो काट्ने
पैदलयात्रुले के गर्ने ?
फुटपाथको प्रयोग गर्ने, फुटपाथ नभएको खण्डमा दाहिने किनाराको प्रयोग गर्ने ।
कमिलाको जस्तो ताँतीमा हिँड्ने । पंक्तिमा होईन । पंक्तिमा हिँड्दा धेरै ठाउँ ओगटेर दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ ।
बालबालिकालाई डोहो¥याउँदा सडकको बाहिरी किनारामा पारेर डोहो¥याउनुपर्छ । भित्र पार्दा गाडीले बालबालिकालाई ठक्कर दिने जोखिम धेरै हुन्छ ।
आकाशे पुलको प्रयोग गर्ने । आकाशे पुल भएको ठाउँमा सडकबाट बाटो काट्दा तिब्र गतिमा आएको गाडीले ठक्कर दिने संभावना धेरै हुन्छ ।
रोकिराखेको गाडीको अगाडि वा पछाडिबाट बाटो काट्नुहुन्न । किनभने रोकिराखेको गाडीले छेकिने भएकाले अर्को गाडीले नदेख्दा दुर्घटना हुन सक्छ ।
बाटो काट्दा छोटो र सिधा ठाउँबाट मात्र बाटो काट्ने । छड्के गर्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ ।
नजिकै रहेको जेब्राक्रसिङ र आकाशे पुलबाट बाटो नकाट्नु भनेको लापरवाही हो । कानुनमा पैदलयात्रुलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था नभएकाले समस्या छ । उनीहरुलाई हामी सम्झाइबुझाइ गरेर पठाउँछौं ।
सवारी चालकले के गर्ने ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका चालकको हुन्छ । उसले ध्यान दिए धेरै दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छ ।
सर्पको हिँडाइमा गाडी चलाउनु हुन्न ।
जाँडरक्सी खाएर चलाउनु हुन्न ।
सडकमा ध्यान दिनुपर्छ । मोबाइलमा बोल्ने, भित्तामा भएका होडिङबोर्ड हेर्ने, अरुसँग गफ गर्ने गर्नुहुन्न ।
रातको समयमा फग लाइट र डिपर लाईटको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
एम्बुलेन्स, दमकल आए पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
साईडलाइटको सहि प्रयोग गरेर दाहिने तर्फबाट ओभरटेक गर्ने ।
लेन अनुसान पालना गर्ने ।
मोटरसाइकल चालकले कान छोपिने गरि हेलमेट लगाएर फिता बान्नुपर्छ । दुर्घटना भइहाले टाउको जोगाउन मद्दत गर्छ ।
यसरी बालबालिका, यात्रु र चालकले आफ्नो जम्मेवारी पूरा गरे दुर्घटना न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्छ । तर त्यसको लागि व्यक्तिमा सम्यता र संस्कारको विकास आवश्यक छ ।
नत्र यी कुराहरु पूर्ण रुपमा लागु हुन गाह्रो छ । ट्राफिक प्रहरीले सकेसम्म सचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ । निरन्तर प्रयासरत छौ । तपाईको पनि साथ भए कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो कि ?